New Year စင်မြင့်ထက်ကနေ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေ ကို တိုင်တည်ပြီး စင်မြင့်ပေါ်ကနေ ချစ် သူ အိမ့်ချစ်ချော ကို လက်ထပ် ခွင့် တောင်းခံခဲ့တဲ့ နေဝင်း – Shwewiki.com
New Year စင်မြင့်ထက်ကေ န တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေကို တိုင်တည်ပြီး စင်မြင့်ပေါ်ကနေ ချစ်သူ အိမ့်ချစ်ချောကို လက်ထပ်ခွင့် တောင်းခံခဲ့တဲ့ နေဝင်း
ပရိ သတ်ကြီးရေ.. တစ်နိုင်ငံလုံးကလူငယ်တွေ အားကျရတဲ့ ဆယ်လီစုံတွဲတွေထဲမှာ Snare အဖွဲ့က နေ၀င်းနဲ့ Travel Blogger လေး အိမ့်ချစ်ချော တို့စုံတွဲက အပါဝင်ပါပဲနော် ။ ချစ်သူသက်တမ်း (၉) နှစ်ကျော်တဲ့ထိ မပြောင်းလဲတဲ့ချစ်ခြင်း မေတ္တာတွေနဲ့ အတူတူ ကြိုးစားရုန်းကန်ရင်း အောင်မြင်လာခဲ့ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေကိုတော့ စာဖွဲ့လို့တောင်ကုန်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးနော် .
ဒီ (၂၀၁၉) ခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးညလေးမှာတော့ ဦးနေ၀င်းတစ်ယောက် New Year စင်မြင့်ထက်ကနေ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေကို တိုင်တည်ပြီး စင်မြင့်ပေါ်ကနေ ချစ်သူ အိမ့်ချစ်ချောကို လက်ထက်ခွင့် တောင်းခံခဲ့ပါတယ် ။ တစ်နိုင်ငံလုံးက မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ အားလုံး အားကျလွန်းလို့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေထက်မှာ ပလူပျံအောင် ရေးသားနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ် ။ နောက်ဆုံးတော့ ပရိသတ်တွေအားလုံးမျှော်လင့်တောင့်တ နေကြတဲ့ နေ၀င်းတို့စုံတွဲရဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးကို မြင်ရတော့မှာဆိုတော့ အားလုံးလည်း ၀မ်းသာနေကြမယ်ထင်ပါတယ် ။
အိမ့်ချစ်ချောက လည်း ပရိသတ်တွေရှေ့မှာပဲ လက်ထွက်ခွင့်တောင်းတာကို ခေါင်းငြိမ့်ခဲ့ပြီဆိုတော့ ဘယ်တော့ Pre-Wedding ပုံလေးတွေနဲ့ထပ်အားကျအောင် လုပ်ဦးမလဲဆိုတာကလည်း ရင်ခုန်စရာပါပဲနော် ။ Congratulations ပါ နေ၀င်းနဲ့အိမ့်ချစ်ချောရေ.သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀တစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်။
Source : Nay Win : Credit Molly ( Cele Connections)
New Year စငျမွငျ့ထကျကေ န တဈနိုငျငံလုံးက ပရိသတျတှကေို တိုငျတညျပွီး စငျမွငျ့ပျေါကနေ ခဈြသူ အိမျ့ခဈြခြောကို လကျထပျခှငျ့ တောငျးခံခဲ့တဲ့ နဝေငျး
ပရိ သတျကွီးရေ.. တဈနိုငျငံလုံးကလူငယျတှေ အားကရြတဲ့ ဆယျလီစုံတှဲတှထေဲမှာ Snare အဖှဲ့က နဝေငျးနဲ့ Travel Blogger လေး အိမျ့ခဈြခြော တို့စုံတှဲက အပါဝငျပါပဲနျော ။ ခဈြသူသကျတမျး (၉) နှဈကြျောတဲ့ထိ မပွောငျးလဲတဲ့ခဈြခွငျး မတ်ေတာတှနေဲ့ အတူတူ ကွိုးစားရုနျးကနျရငျး အောငျမွငျလာခဲ့ကွတဲ့ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ ခဈြခွငျးတှကေိုတော့ စာဖှဲ့လို့တောငျကုနျနိုငျမယျမထငျပါဘူးနျော .
ဒီ (၂၀၁၉) ခုနှဈရဲ့ နောကျဆုံးညလေးမှာတော့ ဦးနဝေငျးတဈယောကျ New Year စငျမွငျ့ထကျကနေ တဈနိုငျငံလုံးက ပရိသတျတှကေို တိုငျတညျပွီး စငျမွငျ့ပျေါကနေ ခဈြသူ အိမျ့ခဈြခြောကို လကျထကျခှငျ့ တောငျးခံခဲ့ပါတယျ ။ တဈနိုငျငံလုံးက မိနျးကလေး ပရိသတျတှေ အားလုံး အားကလြှနျးလို့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှထေကျမှာ ပလူပြံအောငျ ရေးသားနကွေတာလညျးတှရေ့ပါတယျ ။ နောကျဆုံးတော့ ပရိသတျတှအေားလုံးမြှျောလငျ့တောငျ့တ နကွေတဲ့ နဝေငျးတို့စုံတှဲရဲ့ မင်ျဂလာပှဲလေးကို မွငျရတော့မှာဆိုတော့ အားလုံးလညျး ဝမျးသာနကွေမယျထငျပါတယျ ။
အိမျ့ခဈြခြောက လညျး ပရိသတျတှရှေမှေ့ာပဲ လကျထှကျခှငျ့တောငျးတာကို ခေါငျးငွိမျ့ခဲ့ပွီဆိုတော့ ဘယျတော့ Pre-Wedding ပုံလေးတှနေဲ့ထပျအားကအြောငျ လုပျဦးမလဲဆိုတာကလညျး ရငျခုနျစရာပါပဲနျော ။ Congratulations ပါ နဝေငျးနဲ့အိမျ့ခဈြခြောရေ.သာယာပြျောရှငျတဲ့ဘဝတဈခုကိုအမွနျဆုံးတညျဆောကျနိုငျပါစလေို့ဆုမှနျကောငျးတောငျးလိုကျပါတယျနျော။